Zera diki rechando: chii, kana zvaitika uye zvinokonzeresa | Network Meteorology
Zera diki rechando
ChiGerman Portillo | 30/03/2021 10:49 | Kuparadzanisa
Vazhinji vedu tinoziva nezera rakajairika zera rechando rakaitika pasi redu. Nekudaro, nhasi tiri kuzotaura nezve iyo zera diki rechando. Icho hachisi chiitiko chepasirese asi inguva yekudzikira kwechando kwakaratidzirwa nekuwedzera kwemazaya echando munguva yazvino. Izvo zvakaitika pakati pezana ramakore rechi13 nerechi19, kunyanya muFrance. Ivo ndeimwe yenyika dzakatambura zvakanyanya kubva parudzi urwu rwekupisa kwekudonha. Iyi inotonhora mamiriro ekunze yakaunza mimwe yakaipa mhedzisiro uye yakakonzera kuti mwana wevanhu achinjike kune itsva nharaunda mamiriro.
Naizvozvo, isu tiri kuzotsaurira ichi chinyorwa kukuudza iwe zvese zvaunoda kuti uzive nezve diki chando zera uye kukosha kwayakaita.
1 Zera diki rechando
2 Zvidzidzo paChidiki Ice Age
4 Nguva yechando nguva
Inguva yemamiriro ekunze anotonhora akaitika muEurope neNorth America kubva mugore ra1300 kusvika kuma1850. Inoenderana nenguva iyo iwo tembiricha aive mashoma mashoma uye mavhavha aive akaderera pane zvakajairwa. MuEurope chiitiko ichi chaiperekedzwa nezvirimwa, nzara nenjodzi dzinongoitika dzega. Kwete chete iyo yakakonzera kuwanda kwemvura muchimiro chechando, asi zvakare yakadzikisa huwandu hwezvirimwa. Inofanirwa kutariswa kuti tekinoroji iriko mune ino nharaunda haina kufanana nezvazviri nhasi. Parizvino tine mamwe maturusi mazhinji ekugona kudzikisira mamiriro akashata anounzwa kwatiri mumamiriro ekunze aya.
Iko kutanga chaiko kweiyo diki chando zera haina kujeka. Zvakaoma kuziva kuti mamiriro ekunze anotanga kuchinja uye kukanganisa. Tiri kutaura nezve mamiriro ekunze ari kuunganidzwa kwese data rakawanikwa nekufamba kwenguva mudunhu. Semuenzaniso, kana isu tikaunganidza ese akasiyana zvakare senge tembiricha, huwandu hwezuva rezuva, hutongi hwemhepo, nezvimwe. Uye isu tinowedzera iko nekufamba kwenguva, tichava nemamiriro ekunze. Aya maitiro anochinja-chinja gore rimwe nerimwe uye haagadzikane nguva dzose. Kana tichiti mamiriro ekunze ndeerumwe rudzi, imhaka yekuti nguva zhinji inoenderana nemitengo yezvinhu zvinoenderana nerudzi urwu.
Zvisinei, tembiricha haisi kugara yakatsiga uye gore rega rega inosiyana. Naizvozvo, zvinonetsa kuziva mushe kana kwaive kutanga kweiyo diki chando zera. Tichifunga nezvekuoma kwekufungidzira zvikamu izvi zvinotonhora, miganho yenguva diki yechando inosiyana pakati pezvidzidzo zvinogona kuwanikwa nezvazvo.
Zvidzidzo paChidiki Ice Age
Zvidzidzo zveLaboratory yeGlaciology neGeophysics yeEnharaunda yeYunivhesiti yeGrenoble uye yeLabhoritari yeGlaciology neGeophysics yeZvakatipoteredza yeFederal Polytechnic Chikoro cheZurich, zvinoratidza kuti kuwedzerwa kwechando kuri kukonzerwa nekuwedzera kukuru kwekunaya, asi kudzikira kwakanyanya kwekushisa.
Munguva yemakore aya, kufambira mberi kwemazaya echando kwainyanya kukonzerwa nekuwedzera kwe zvinopfuura 25% yechando munguva yechando. Munguva yechando zvakajairika kuti panonaya mvura muchimiro chechando munzvimbo zhinji. Nekudaro, mune iyi kesi, aya matonhodzo akatanga kuwedzera kusvika padanho zvekuti aivapo mumatunhu makanga musina chando kare.
Kubva kupera kweChidiki Ice Age, kudzoka kwemazaya echando kwave kungoenderera. Ese echando akarasikirwa nechetatu chevhoriyamu yavo uye paavhareji ukobvu hwakadzikira nemasentimita makumi matatu pagore panguva ino.
Ngatione kuti ndezvipi zvinokonzeresa zvidiki zera rechando Iko hakuna kubvumirana kwesainzi pamazuva uye zvikonzero zvinogona kutanga ino nguva yechando. Zvikonzero zvikuru zvinogona kunge zvichikonzerwa nehuremu hwemwaranzi yezuva iyo inowira pamusoro penyika. Uku kudzikira kwezuva remwaranzi kunokonzeresa kutonhora kwenzvimbo yese uye shanduko mune simba remuchadenga. Nenzira iyi, kunaya nenzira yechando kunoitika kazhinji.
Vamwe vanotsanangura kuti zvinoitika zvenguva diki yechando zvinokonzerwa nekuputika kwemakomo akasvibisa mhepo zvishoma zvishoma. Muzviitiko izvi tiri kutaura nezve chimwe chinhu chakafanana nezviri pamusoro asi nechikonzero chakasiyana. Haisi iyo shoma mwero wezuva mwaranzi unouya wakananga kubva kuzuva, asi ndiko kuita rima kwemweya wemuchadenga uko kunokonzera kudzikiswa kwemwenje yezuva inobata pasi repasi. Mamwe emasayendisiti anodzivirira dzidziso iyi anosimbisa kuti pakati pemakore 1275 na1300, yaive nguva iyo chando chidiki chakatanga, 4 kuputika kwemakomo munzvimbo yemakore makumi mashanu kungave kuri kukonzera chiitiko ichi nekuti zvese zvakaitika panguva iyoyo.
Guruva rinoputika rinoratidzira mwaranzi yezuva nenzira inochengetedza uye inoderedza kupisa kwese kunotambirwa nepasi. Iyo US National Center yeAtmospheric Research (NCAR) yakagadzira modhi yemamiriro ekunze kuyedza mhedzisiro yekuputika kwemakomo anoputika, pamusoro pemakore makumi mashanu. Mhedzisiro yekukwira kwemakomo anoputika pamamiriro ekunze anotendera mhedzisiro yemakomo anoputika. Zvese izvi zvinokonzeresa mhedzisiro zvaizozvara iyo Ice Ice Age. Refriji, kuwedzera kwechando chegungwa, shanduko mukutenderera kwemvura, uye kudzikisa kupisa kwekufambisa kuenda kumahombekombe eAtlantic zvinowanzoitika zviitiko zveiyo Little Ice Age.
Nguva yechando nguva
Zvisinei, zvinofanirwa kutariswa kuti kusimba kweiyo diki chando zera hakuenzaniswe nedzimwe nguva refu uye dzakasimba idzo pasi redu rave naro padanho regirazi. Izvo zvinokonzeresa mamiriro ekunze hazvizivikanwe asi mushure mechiitiko ichi apo pakaonekwa zvisikwa zvakawanda. Izvi zvinoreva kuti padanho rekushanduka, iyo nguva yechando yakaitika papasi redu makore emamirioni mazana manomwe apfuura angave akanaka.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve idiki nguva yechando uye maitiro ayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Meteorology » Kuparadzanisa » Zera diki rechando